နောက် ၂၄ နာရီ အတွင်းရှယ်ဝုန်းတော့မယ့် ဒေသများ - Linkardipa
Homeမိုးေလဝသနောက် ၂၄ နာရီ အတွင်းရှယ်ဝုန်းတော့မယ့် ဒေသများ
October 23, 2021 Linkardipa မိုးေလဝသ Comments Off on နောက် ၂၄ နာရီ အတွင်းရှယ်ဝုန်းတော့မယ့် ဒေသများ
နောက် ၂၄ နာရီ အတွင်း မုံရွာခရိုင် ရွှေဘိုခရိုင်ကန်ဘလူခရိုင်ကောလင်းခရိုင် တကောင်း ထီးချိုင့် အင်းတော် ဘုံချောင်း မဲဇာ မန်လည် မံစီ ကောလင်းခရိုင် ဗန်းမောက် ဝန်းသို ပင်လည်ဘူးဒေသများ မိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီး သဖန်းဆိပ်ဆည်ရေဖြည့်မိုးတွေရွာနိုင်ပါတယ်
မြန်မာ့မိုးလေဝသနှင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာအချက်လက်များတိကျသေချာစွာခန့်မှန်းနိုင်ရန် Myanmar Meteorological Su Su San Meteorogist Weather forecast Centre ကို တိုင်းပြည်အကျိုးပြု မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့အကျိုးပြု တည်ထောင်နိုင်ရန်ကြိုးစားနေပါတယ် ကူညီပေးမည့်သူများလည်း ရှိနေပါတယ်
မင်းဂွတ်သီးလေးချစ်သူတွေကရော ဘယ်လို့ဆန္ဒရှိပါသလည်း လက်ရှိကူညီပေးရန်အဆိုပြုထားသူများကတော့
Tin Ko. Yangon နှင့်Olar Magway တို့ကကူညီဆောင်ရွက်ရန် စိတ်အားထက်သန်လျှက်ရှိပါတယ်
ေနာက္ ၂၄ နာရီ အတြင္းရွယ္ဝုန္းေတာ့မယ့္ ေဒသမ်ား
ေနာက္ ၂၄ နာရီ အတြင္း မုံရြာခရိုင္ ေရႊဘိုခရိုင္ကန္ဘလူခရိုင္ေကာလင္းခရိုင္ တေကာင္း ထီးခ်ိဳင့္ အင္းေတာ္ ဘုံေခ်ာင္း မဲဇာ မန္လည္ မံစီ ေကာလင္းခရိုင္ ဗန္းေမာက္ ဝန္းသို ပင္လည္ဘူးေဒသမ်ား မိုးရြာသြန္းနိုင္ၿပီး သဖန္းဆိပ္ဆည္ေရျဖည့္မိုးေတြရြာနိုင္ပါတယ္
ျမန္မာ့မိုးေလဝသႏွင့္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာအခ်က္လက္မ်ားတိက်ေသခ်ာစြာခန႔္မွန္းနိုင္ရန္ Myanmar Meteorological Su Su San Meteorogist Weather forecast Centre ကို တိုင္းျပည္အက်ိဳးျပဳ ျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ တည္ေထာင္နိုင္ရန္ႀကိဳးစားေနပါတယ္ ကူညီေပးမည့္သူမ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္
မင္းဂြတ္သီးေလးခ်စ္သူေတြကေရာ ဘယ္လို႔ဆႏၵရွိပါသလည္း လက္ရွိကူညီေပးရန္အဆိုျပဳထားသူမ်ားကေတာ့
Tin Ko. Yangon ႏွင့္Olar Magway တို႔ကကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္အားထက္သန္လၽွက္ရွိပါတယ္
နောက်ဆုံးတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ လူသွားလာ အများဆုံး အဓိကဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်-မန်းလေး အမြန်လမ်းကြီးထိ သတိပေးချက်တွေ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ